China M ekara kpaliri welded ntupu ngere N'ihi Solar Plants Manufacturer and Supplier | Oghere
PRO.FENCE na-arụpụta ma na-ekesa ọtụtụ eriri waya waya weld maka izute ọtụtụ ngwa. Dị ka 3D Curved weld ntupu ngere, mgbochi mgbochi ịrị ngere, ụkpụrụ ụlọ weld ntupu ngere. Ọ bụ a ngere nsu iji waya welded ọnụ firstly na mgbe ahụ mkpa ekwe igwe-eme ka iche iche ekara na panel. A na-edozi wires nke weldesh mesh pan, na-emechi ihe mgbochi siri ike ma na-adịgide adịgide.
PRO.FENCE na -emepụta ụdị ụdị a 3D Curved welded waya nsu bụ maka ngwa nke ike anyanwụ. Anyị na-enyekarị ya na galvanized ọkụ ma mgbe ụfọdụ ndị ahịa anyị chọrọ ntụ ntụ zuru ezu ma ọ bụ mkpuchi PVC. Maka ntọala ahụ, enwere nhọrọ 2 ị ga - ahọrọ gụnyere ikpo ala, ihe mgbochi. Anyị na-adụ ọdụ ịghasa ịchekwa oge iwu ma ọ bụrụ na ọrụ ahụ dị na mbara ala dị mgbagwoju anya.
A na-ejikarị ya eme ihe na ụlọ ọrụ ike anyanwụ, ugbo ala, mana enwere ike iji ya na ogige mmepụta ihe, dịpụrụ adịpụ nke ụzọ.
Ntupu: 60 × 120mm / 75 × 150mm
Ogwe ogwe: H500-2500mm × W2000mm
Biputere: φ48 × 1.5mm /50-70×1.5mm
Ejiri akwa: SUS 304
Emechara: Hot tinye kpaliri / ntụ ntụ ntekwasa / ịkwanyere ntekwasa (Brown, Black, White)
Usoro na ikuku carbon dị mma nwere ike dị elu, ma mechaa ya na galvanized ọkụ (zinc ntekwasa ruo 450g / m2), kpọkọta ya site na iji akwa SUS 304. Ndị ahụ na-arụ ọrụ pụrụ iche na mgbochi corrosion. PRO.FENCE ekweghị nkwa nchara ọ dịkarịa ala maka afọ 6.
Ọ gụnyere nke ntupu panel, posts na ala ikpo. Ọdịdị dị mfe ga-enyere aka wụnye ngwa ngwa na saịtị. Enwere ike ịgbanwe ohere site n’etiti ebe ọbụla o kwere omume ọbụlagodi n’ugwu ahụ dị mgbagwoju anya.
The triangle ekwe udi n'elu na ala nke ntupu panel maka iguzogide mpụga ujo na-emekwa ka ngere anya mara mma.
Nkebi NO: PRO-01 Ebute :bọchị: -21BỌCH 15 15-21 Nbanye ngwaahịa: CHINA
Nke gara aga: Perforated metal nsu panel maka ụkpụrụ ụlọ ngwa
Osote: 3D Curved welded waya nsu, na-ewu ewu weld ntupu ngere dị ka nchekwa fencing nke obibi na North American
Galvanized welded waya ngere maka ugbo ihe ...
3D Curved welded waya nsu, na-ewu ewu weld ntupu ...
C ekara Powder ntekwasa welded ntupu ngere N'ihi Po ...